Delegasiona UNWTO any Bruxelles hanaovana fifampiresahana amin'ireo mpitarika ny vondrona eropeana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Delegasiona UNWTO any Bruxelles hanaovana fifampiresahana amin'ireo mpitarika ny vondrona eropeana
Associations News • Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Vaovao isan-karazany
Ny sekretera jeneralin'ny Fikambananan'ny fizahantany manerantany (UNWTO) dia nitarika delegasiona avo lenta tany Bruxelles ho an'ny andian-fivoriana natao hiantohana ny fizahantany mijanona ho eo an-tampon'ny fandaharana politika an'ny Andrimpanjakana Eoropeana.
Satria ny UNWTO dia mitarika ny famerenana indray ny fizahantany manerantany, ny sekretera jeneraly Zurab Pololikashvili dia niara-niasa akaiky tamin'ireo mpitondra eropeana mba hahazoana antoka fa hahazo ny sehatra ara-politika sy ara-bola ilaina ny fiarovana ny asa fivelomana sy fiarovana ireo orinasa. Nandritra ny fitsidihany tany Bruxelles, Andriamatoa Pololikashvili dia nanentana ny mpitarika ireo andrim-panjakana eropeana hanova ny drafitra feno faniriana ho an'ny famerenana amin'ny laoniny amin'ny alàlan'ny fandrindrana fonosana fepetra hamaly mba hahafahan'ny fizahan-tany miverina ary hitondra ny famerenana amin'ny laoniny ny harinkarena eropeana.
Mandritra izany fotoana izany, nanamafy ny maha zava-dehibe ny fanohanana sy ny fampitomboana ny fizahan-tany eto an-toerana ny mpitarika UNWTO. Raha ny filazan'Andriamatoa Pololikashvili dia manana tombony lehibe ny fizahan-tany any an-toerana, anisan'izany ny fanarenana sy fampandrosoana ny vondrom-piarahamonina ambanivohitra. Na izany aza, mba hahatanteraka an'io fahafaha-manao io, ny governemanta sy ny Andrimpanjakana Eoropeana dia mila manome fitarihana lehibe kokoa sy fitarihana matanjaka kokoa.
Ny delegasion'ny UNWTO dia nihaona tamin'i Andriamatoa Margaritis Schinas, filoha lefitry ny kaomisiona eropeana, Andriamatoa Thierry Breton, komisiona eropeana ho an'ny tsena anatiny, Andriamatoa Virginijus Sinkevičius, kaomisera eropeana misahana ny tontolo iainana, ranomasina ary jono, niaraka tamin'ny biraon'ny Andriamatoa David Sassoli , Filohan'ny parlemanta eropeana ary solontena manan-danja amin'ny filankevitra eropeana. Ao ambadiky ny fivoriana dia voamarina fa ny olana amin'ny fanalefahana ny fameperana ny dia dia ho fandaharam-potoana amin'ny fivoriana manaraka amin'ny filankevitra eropeana, izay manasongadina ny maha-zava-dehibe sy ny faharetan'ny fidiran'ny UNWTO.
Ilaina ny mitarika avo lenta
Ny sekretera jeneraly Pololikashvili dia nilaza fa: “Ny fizahan-tany dia andrin'ny toekarena eropeana, mpampiasa lehibe ary loharanom-pahalalana ho an'ny olona an-tapitrisany manerana ny kaontinanta. Ny mpitarika ny andrim-panjakana Eoropeana dia nanao sonia ny fahavononany hanohana ny fizahan-tany amin'izao fotoan-tsarotra izao. Ny fahaiza-mitarika avo lenta sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny andrimpanjakana, ny governemanta ary ny orinasa dia ilaina mba handikana ny fikasana tsara ho hetsika hentitra ary hanampy ny fizahan-tany hitarika ny fahasitranan'ny kaontinanta amin'ny krizy. ”
Ny sekretera jeneraly Pololikashvili dia niarahaba ireo mpitondra eropeana tamin'ny andraikiny tamin'ny fanokafana ny sisin-tanin'ny firenena mpikambana ao amin'ny EU alohan'ny faran'ny vanim-potoana fahavaratra. Nanome tosika be dia be ny dia sy fizahan-tany izany ary nahita fiakarana marim-pototra tamin'ny fahatongavan'ireo mpizahatany iraisam-pirenena tamin'ny tsena eropeana maro.
Ny fandrindrana ihany no fomba hanombohana indray ny fizahantany
Miantso ny governemanta ny UNWTO aza manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny laoniny ary ny fanidiana ny sisintany satria voaporofo fa tsy mandaitra amin'ny fifehezana ny fihanaky ny viriosy. Zava-dehibe ny fiovan'ny fifantohana amin'ny famerana ny fivezivezena mankany amin'ny fiantohana ny fivezivezena azo antoka amin'ny alàlan'ny fametrahana fepetra toy ny mora azo, fitiliana haingana amin'ny fiaingana. Hiaro ny fahasalaman'ny mpandeha sy ny fizahan-tany sy ny mpiasa mifandraika amin'ny fizahan-tany ny fepetra toy izany, sady mampiorina ny fahatokisana sy ny fahatokisan-tena.
Ny fizahan-tany dia manome 10% amin'ny harin-karena faobe ho an'ny Vondrona eropeana ary manohana orinasa maherin'ny 2.4 tapitrisa. Ny sehatra dia eo am-pelatanan'ny fahalavoana eo anelanelan'ny 60% sy 90% amin'ny famandrihana raha oharina amin'ny vanim-potoana nitoviana tamin'ny taona lasa. Ny tombam-bidin'ny vola miditra amin'ity taona ity ho an'ny trano fandraisam-bahiny sy trano fisakafoanana, mpandraharaha fizahan-tany, lalamby lavitra ary ho an'ny fitsangantsanganana an-tsambo sy ny seranam-piaramanidina dia 85% ka hatramin'ny 90%. Vokatr'io areti-mandoza io dia olona 6 tapitrisa no mety ho very asa.
Ity fitsidihana an'i Bruxelles ity dia avy ao ambadiky ny Fifanarahana Eoropeanina momba ny fizahan-tany, izay nanamafisan'Andriamatoa Pololikashvili ny maha-zava-dehibe ny fanohanana sy fampiroboroboana ny fampiasam-bola maitso amin'ny fizahan-tany mba hivoahana amin'ny laoniny maharitra amin'ny krizy ankehitriny.